Isebenza njani iSorare, ibhola ekhatywayo yefantasy ebalekayo e-Ethereum-Cazoo
Ikhaya » Ikhaya » Isebenza njani iSorare, ibhola ekhatywayo yefantasy ebaleka e-Ethereum
tag: Amanqaku ajikeleze onke, I-NFT, Iimpawu ezingabonakaliyo, ISorare, Amakhadi omvuzo, Amakhadi eSorare anqabile, Amakhadi eSareare Super Rare, Amakhadi ahlukileyo eSorare
I-Sorare ngumdlalo webhola omnandi oqhubekekayo Ethereum. Ndifuna ukubhala imigca embalwa ukuqonda indlela iSorare esebenza ngayo, kwaye ndicinga ukuba isikhokelo esincinci siyakuphuma kuyo ukwakha iqela lakho kwaye uqalise.
Ukuba eli lixesha lakho lokuqala ukufunda le mizila, ufike kakuhle.
Apha, kula maphepha, ndabelana ngeengcinga zeli lizwe le-crypto neCazoo. Ukuba uyawuthanda umxholo wam kwaye ufunde into ngokundifunda, ndonwabile. Ukwabelana kunenkathalo! Kwakhona, ukuba ucinga ukubhalisela iSorare, yenza oko ngokulandela eli khonkco: Zonke iinkonzo ze-intanethi. Ewe likhonkco lokudlulisa. Kodwa ndithembe, uya kuba nethuba elikhulu-siya kufumanisa kamva.
Ngaba awufuni ukubhalisa ngekhowudi yam? Kulungile yiya kugoogle ukhangele enye phofu!
I-Sorare ngumdlalo webhola ekhatywayo osekwe kwi-blockchain
Ukuseta iakhawunti yakho
Ubungakanani bamakhadi eSorare
Kutheni le nto ndifanele ndibe namakhadi abonakalayo eSorare?
Ndiyenza njani iqela lam kwiSorare?
Yintoni iRokie League?
Lakhiwa njani iqela?
Idlalwa nini imidlalo eSorare?
Abalwa njani amanqaku?
Ubalwa njani amanqaku oMdlali?
Athini amabhaso kwimidlalo yeligi evekini?
Isebenza njani iSorare? I-Sorare ithatha ithuba lokuthandwa kwamakhadi okudlala ekhatywayo, ngokungathi zizitikha zehlabathi zePanini, kunye nemidlalo yeligi emnandi, evumela abadlali ukuba batshintshisane ngamakhadi, bathathe inxaxheba kwiitumente kwaye baphumelele amabhaso. Zonke zisebenzisa i-NFT, iithokheni ezingabonakaliyo, okanye izinto eziqokelelweyo zedijithali.
Umdlalo webhola omnandi obaleka kwi-Ethereum blockchain kwaye usebenzisa i-NFT, ngokubonakalayo unqabile amathokheni, ke ngoko ngexabiso elinokubakho lokukhula.
Uluvo lukaSorare lokwaphula umhlaba, imodeli yabo eyahlukileyo yeshishini, ifumene inkxaso kwiinkampani eziphambili ezinje ngeConSSys, Ubisoft kunye neOpta, kunye nokukhanya okuluhlaza, kunye nokuthatha inxaxheba, kwishishini lebhola ekhatywayo lehlabathi. Inkanyezi yeBarcelona uGerard Piqué ngumtyali mali kwinkampani, kwaye uninzi lweeklabhu zebhola ezaziwa kakhulu kwihlabathi zidweliswe ngokusemthethweni kumdlalo.
Esi sikhokelo sichaza indlela yokwakha iqela, urhwebo kunye nokuphumelela kwiSorare, lonke elixa wonwabele izibonelelo zenethiwekhi evulekileyo neyabelwe amagunya.
Ukwenza iakhawunti kwi-Sorare kulula.
Unxibelelana ne le dilesi, kwaye kufuneka unikeze ngedilesi ye-imeyile, ipaswedi kunye nesiteketiso (esiya kuba ligama lakho umlawuli), okanye ungangena ngeakhawunti esele ikhona kaGoogle okanye kaFacebook (owaziwayo Ukungena ngemvume kuluntu). Kutheni usebenzisa ikhowudi yokuhambisa: kuba uya kufumana ikhadi elinqabileyo! Awuyi kuyinikwa ngokukhawuleza, kodwa emva kokuba uthathe abadlali aba-5 kwiNtengiso.
Ungacela amakhadi oluntu asimahla ayi-XNUMX nje ukuba ungene.
Ikhadi leSorare yinto yomqokeleli wedijithali enelayisensi ngokusemthethweni evela kumdlali webhola ekhatywayo wexesha elithile lebhola.
Enkosi kubuchwepheshe be-blockchain bonke abalandeli banokuqokelela abadlali babo ababathandayo ngezibonelelo zokunqongophala okubonakalayo (ubonelelo olusisigxina). Ngapha koko, iiKhadi zeSorare zinokutshintshiselana ngokukhululekileyo kwaye zinokusetyenziswa kwihlabathi elivulekileyo lezicelo ezahlukeneyo kunye nemidlalo: besisithi u-Ubisoft utshatile ngeprojekthi, akunjalo? Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa uzenzele eyakhe itumente kunye neligi enokufikelelwa ngamakhadi eSorare. OneShotLeague. Ukuqokelelwa ngakunye kunandipha uninzi lweempawu zeasethi ezifumaneka kwi-blockchain: ayinakukotshwa okanye ibiwe. Abasebenzisi bayakonwabela ukufikelela kwimbali yedijithali epheleleyo yekhadi. Ngexesha le-2020-21, kukho amanqanaba amathathu okunqaba kwikhadi ngalinye leSorare: Eyahlukileyo, iSuper Raro (ikopi ezili-10) kunye neRaro (ikopi ezili-100).
Amanqanaba amathathu okunqaba kwamakhadi e ISorare
Ezinye iingcebiso zokuvavanya ukuba nekhadi leSorare:
Umnqweno wakhe wokuqokelelwaIkhadi ngalinye liya kuba nenqanaba elikhethekileyo lokunqweneleka kwaye, ngenxa yoko, lixabiso kubantu abohlukeneyo (umdlali omelweyo, inombolo yecala, ubuzwe, iklabhu ...)
Ixabiso layo kumdlaloUkongeza kumtsalane oqokelelweyo kunye nexabiso langaphakathi lekhadi ngalinye, banokusetyenziselwa ukudlala. I-Sorare ikuvumela ukuba uwasebenzise kumdlalo webhola ekhatywayo omnandi obizwa ngokuba yi-SO5 apho unokufumana khona amabhaso veki nganye.
Ixabiso lomdlalo wesithathuUmbono wokugqibela kukuba amakhadi eSorare anexabiso kwimidlalo emininzi, hayi kwi-SO5 yeSorare uqobo. Abaphuhlisi beSorare bacinga umhlaba apho abanye abapapashi bezemidlalo bakhe amava amatsha asebenzisa iiKhadi zeSorare (jonga Ubisoft, jonga ngasentla).
Xa ubhalisela iSorare okokuqala uza kufumana Iipakethe zamakhadi eziqhelekileyo (ke ayisiyiyo Rare, Super Rare okanye eyahlukileyo), njengoko ugqibezela inyathelo ngalinye lenkqubo yabo elula kwaye ethe ngqo yokukhwela.
Amakhadi oluntu asimahla owafumanayo akuvumela ukuba uphonononge umdlalo kwaye ujoyine iqela Umanyano lweRokie, uManyano lwabaQalayo: iligi enikezelwe kubaphathi abatsha.
Abaphathi beLigi yaBaqalayo bafumana imivuzo yamakhadi esiqhelo aqhelekileyo Iqela labasaqalayo livumela abaphathi abatsha ukuba bakhuphisane iiveki ezisibhozo zomdlalo, kwaye uya kuba nakho ukuthatha inxaxheba kule ligi, okanye kuQeqesho, amaxesha ama-8 kuphela, emva koko uya kuba nakho ukuthatha inxaxheba kubume becandelo lengingqi kunye nehlabathi. .
Emva kweeveki ezisi-8 zokudlala, uyakutshintsha ubume boMphathi oMtsha uye kuMphathi omtsha-ngeli xesha linokubakho Amakhadi amabhaso eSorare. Ungasonga imikhono yakho uye kuthenga abadlali abatsha, amakhadi amatsha, kwi Dlulisa uMakethiImarike yokuTshintshela.
Ukujoyina iRokie League kulingana nokujoyina iqela kwiLigi.
Iqela lineendawo zokubeka ezi-5, kwaye zonke ezi-5 kufuneka zigcwaliswe.
Slot yokugcwalisa ukujoyina uManyano kwi ISorare
Ubuncinci i-1 Defender
Ubuncinci i-1 Midfielder
Ubuncinci umhlaseli o-1
Awunakho ukusebenzisa umdlali omnye kabini!
Ukuba unayo iKhadi eliNqabileyo kwiqela lakho ungayibiza ngegama Umphathi weqela, kwaye uya kufumana ibhonasi eyongezelelweyo. Onke amakhadi anokukhethwa njengokapteni, ngaphandle kwamakhadi oluntu.
Nje ukuba abadlali bakhethwe, iqela lakho ligcinwa ngokuzenzekelayo kwaye libekwe kwiLigi nakwiCandelo elikhethiweyo!
Thatha inxaxheba kwiitumente zebhola ekhatywayo ye-SO5 veki nganye kwaye ufumane izinto ezixabisekileyo • kwiSorare
Kuba iSorare ngumdlalo webhola oyintandokazi, iitumente ziqulethe imidlalo yebhola ekhatywayo ehleliweyo kubomi benene. Iitonamenti ezimbini zibanjwa ngeveki:
Ukusukela ngolwesiHlanu 17.00 UTC ukuya ngoLwesibini 04.00 UTC
Ukususela ngoLwesibini 17.00 UTC ukuya ngoLwesihlanu 04.00 UTC
Ungalufumana lonke ulwazi kwezi veki zilandelayo zomdlalo kwi Ibala leMidlalo okanye kube kanye ubhalisile, xa ucofa iqhosha lokuDlala.
Amanqaku amafantasy abalwa emva kwamanyathelo amathathu:
Inkqubo ye- Amanqaku oMdlali (HP) usebenzisa amanqaku ematriki, okt amanqaku asebenzayo kumdlali ebaleni.
Inkqubo ye- Ikhadi lamanqaku (CS) usebenzisa ibhonasi nganye yekhadi (Ixesha, uKapteni kunye neNqanaba leBhonasi)
Inkqubo ye- Amanqaku eqela (TS). Esi sisiphumo samanqaku akho ekhadi ama-5.
Inqaku loMdlali libalwa ngokusekwe kwimisebenzi yomdlali ngexesha lomdlalo.
Amanqaku omdlali kuluhlu lweSorare ukusuka kwi-0 ukuya kwi-100. Kwiphepha lomdlali, uya kufumana amanqaku abo oMdlali kwimidlalo emi-5 yokugqibela. Kwimeko apho ubona umqondiso DNP, imele "Khange udlale", apho umdlali ufumana amanqaku oMdlali o-0.
Amanqaku omdlali abalwa ngolu hlobo lulandelayo:
Amanqaku omdlali = Amanqaku athathayo + amanqaku apheleleyo (macala onke), -ukuba amanqaku ajikelezileyo awalunganga, 0 longezwa.
Il Amanqaku afanelekileyo isekwe kubalo olunefuthe ngqo kwiziphumo zomdlalo ezinje ngeenjongo, uncedo, ikhadi elibomvu, njl.
L 'amanqaku ajikeleze onke ithathela ingqalelo zonke iinkcukacha-manani eziphambili ngexesha lomdlalo, ezingacacanga ukuba zilandelelwe kunalezo zisetyenziselwa ukubala amanqaku, kodwa zibalulekile ekuvavanyeni iimpembelelo zomdlali kumdlalo ngexesha lomdlalo.
Amanqaku ewonke atshixiwe kwi-0 kwaye anqunyelwe kwi-100.
Amanqaku ajikeleze onke asekwe kumanyathelo amancinci kunye narhoqo kumdlalo. Zininzi - 39 ukuba ubandakanya zonke izinto ezenziwa ngumgcini- nakwiSorare onakho khangela yonke itafile.
Ukuba ikhadi lakho linemidlalo emibini kwiveki ezayo yomdlalo, iya kuqala kuphela eya kuvavanywa. Uya kubona kuphela umdlalo ophawulwe kuluhlu lomdlalo wakho waloo veki yokudlala.
IMPEMBELELO ENTSHA IMPEMBELELO ENGANASO
IGol Injongo yakho
Ncedisa Ikhadi elibomvu
Isohlwayo sihlawulwa Isohlwayo ngokuchasene
Gcina kumgca Impazamo eba yinjongo yabachasi
Akukho nethiwekhi ithathiweyo (Abagcini begoli kuphela) Ukuvuma iinjongo ezi-3 okanye ezingaphezulu (Abagcini goli kuphela)
Ukuhlangulwa komkhuseli wokugqibela
Umzekelo wempembelelo ezinokubakho kwezinye izehlo ngexesha lomdlalo kumanqaku ajikeleze onke ISorare
Ukuphela kwamanqaku eSorare akupheleli apho, kodwa ayingomba ophambili kweli phepha lam.
Iqela leSorare libhengeza imbuyekezo (i-ETH + Amakhadi) kwiveki nganye yokudlala kunye necandelo ngalinye kwicandelo lokuDlala lewebhusayithi, phantsi kwesihloko Iphuli yePhuli.
Umqondo weSorare ubukrelekrele, ngokoluvo lwam. Ukubanakho ukuba nala makhadi akho kwaye uphinde uwasebenzise kwezinye iimeko kunye neminye imidlalo kuvula ilizwe elinokubakho. Ayisiyomdlalo kuphela, kodwa ikwayindawo yabaqokeleli.
Inyaniso yokuba ibotshelelwe kwinethiwekhi ye-Ethereum kunye ne-blockchain kusenokwenzeka ukuba kuthintele ukubonakaliswa kwayo kubasebenzisi. Kodwa baya kuza, baya kufika….
Iqela elisemva kweSorare libonakala linobuchule kwaye linolwazi, kwaye ababolekisi ababini abakhulu babathembile: IBenchmark neAccel. Ezi zimbini azihlali ziphosakele.
Kukho izicwangciso zokwandisa iqonga, imephu yendlela ibona indlela ende egcwele uhlaziyo. Sikwilizwe elitsha kangangokuba akulunganga nokuba silindele iinkqubo ezigqibeleleyo ngaphandle kweengxaki: Ndiqinisekile ukuba iqela liya kukhula neqonga.
Inkungu, sele ubhalisele iSorare? Mahala iè!
Inqaku elilandelayoUSorare ungena kwelinye iqela, isigebenga iBoca Juniors 🇦🇷